Ụlọ ime ụlọ dị iche iche nke oge a - Ụlọ ọrụ ime ụlọ dị mma - Nzube mmebe eme - Nobili Imepụta ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, imepụta, ahịa
Ime ụlọ nke oge a
Imezi Imezi Imezi - Onye na-emepụta ihe nhazi
Imepụta imewe ụlọ ọrụ ndị mara mma kpochapụwo ụdị ime ụlọ ndị a - ime ụlọ ime ụlọ
Iji nweta ihe a classic ime imewe echiche, eclectic, oge a ma ọ bụ Mediterranean ụlọ, Amọraịt, nkwari akụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, mmanya ma ọ bụ ụlọ ọrụ, gị mkpa ndị ọkachamara ọrụ nke a ike nke ime imewe ahụmahụ. kasị arụ ọrụ ime ụlọ site n'aka ụlọ ọrụ anyị ụdị ụdị ihe ndozi na arịa ụlọ, gosipụtara uto na njirimara nke onye nwe ya. Nke a bụ ntọala nke nkasi obi, n'ihi ya, ị ga-achọ nlezianya họrọ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nke nwere ike maka 3d imewe ime. Anyị ụlọ ọrụ Noble Interior Design nwere ike inye gị ọkachamara ọkachamara kee ime imewe gị ndụ ụlọ, ime na kichin na oké ntị zuru ezu, ọ bụghị nanị maka style na ikuku, ma ike a ohere ka ọtọ enweghị nke na ọ bụ omume ka ewere ezi nkasi obi. Anyị nwere ike chepụta gị omenala ime imewe, ime imewe maka ụlọ, ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Ogwe, cafes, klọb na salons mma n'obodo dị iche iche dị ka Bucharest, Constanta, Ploiesti, Brasov, Pitesti na ike ịmepụta zuru ezu ma dị mgbagwoju oru ngo nke ọ bụla n'ime ụlọ ọ bụla ụlọ ma ọ bụ onwe obibi ma ọ bụ azụmahịa ohere. Onye ọ bụla ga-eme ka anyị nwee ike ịmepụta ihe dị iche iche pụrụ iche pụrụ iche nke na-egosipụta àgwà nke onye nwe ya, si otú ahụ na-eji ọnọdụ dị ndụ, ụlọ ihi ụra, kichin, uwe. Ịmepụta oghere ime ụlọ maka ime ụlọ na kichin bụ ihe ịma aka ma na-akpali agụụ mmekọahụ n'otu oge ahụ dị ka ọ chọrọ nlezianya na-amụ ihe ndị a họọrọ, ngwá ụlọ, agba maka ịmepụta ime ụlọ. Anyị ọkachamara na-emepụta, architects na ọkachamara na-emepụta ịhụ ike ọtọ oghere ka n'ụzọ zuru ezu afọ ju onye ahịa e ji mara, na-atụgharị uche na-agwa na style nke ndụ, na-eme ya obi na-atọ ụtọ ọ bụla oge nọrọ ọhụrụ set elu. Nobility Interior Design na-enye ihe ngwọta dị mma, ihe bara uru na nke oge a maka ime ụlọ na mma nke ụdị ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ezumike nke mara mma ma ọ bụ nke dị ugbu a n'ụlọ elu. Na anyị na saịtị i nwere ike ịhụ seramiiki taịl, Italian ngwá ụlọ, ibo ụzọ, na nke osisi, ngwa Smeg, ọkụ, parquet Kahrs, sofas na nkuku Ditre Italy na ọtụtụ ndị ọzọ decorations dị kpọmkwem site anyị ụlọ ọrụ na ahịa emeputa ihe. Otu n'ime uru ndị a na-apụghị izere ezere nke ngwọta ngwọta dị otú ahụ bụ ike ịmepụta echiche ndị mbụ dabere na usoro ugbu a maka kpochapụwo, eclectic, baroque, Mediterranean, ma ọ bụ imepụta ime ụlọ nke oge a. Ndị ọkachamara n'ime ime ụlọ anyị emepụtawo ahụmịhe na oge na oge mgbe ha na-eche nnukwu ọrụ iji jikọta ebe ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'otu ụlọ, ma na-enwe nkasi obi na ejiji. Otu n'ime ihe ndị ọhụrụ na ọnọdụ na-imewe na ime ije, mgbe emebe a ụlọ ma ọ bụ a Amọraịt, bụ ike ndụ n'ime ụlọ na kichin na a Nchikota, na-anọchite anya otu ụlọ na isi ihe abụọ ọrụ: a ebe isi nri na a ebe na-agba ndị ọbịa maka erimeri na ntụrụndụ. Designers Noble Interior Design ịnụ ọkụ n'obi nabata ịma aka ọ bụla na mgbe ọ bụla na ogbo nke na-ewu na-anọchi anya na-aga n'ihu oru ngo-abịa na amụma n'ihi repartitioning oghere ebe ewu na-adọ na-ahụkarị uko, rụọ na mputa ije nke ọ bụla ụlọ, na-eweta ọ bụla oru ngo echiche na amụma n'ihi na n'ime ime imewe pụrụ iche na-ahaziri.